Internetka iyo Blogs - Geofumadas
Internet iyo Blogs
isbeddelada iyo talooyin loogu talagalay internetka iyo blogyada.
Geomoments - Dareenka iyo Goobta hal app ah
Waa maxay Geomoments? Kacaankii afaraad ee warshadaha wuxuu naga buuxiyey horumaro teknoolojiyadeed oo weyn iyo isdhexgalka aaladaha iyo xalalka si loo gaaro meel firfircoon oo dareen leh oo degan. Waan ognahay in dhammaan qalabka moobiilka (taleefannada gacanta, kiniiniyada, ama smartwatch) ay awood u leeyihiin inay keydiyaan macluumaad aad u tiro badan, sida faahfaahinta bangiga, ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, tabo cusub, Internet iyo Blogs, dhowr
Kanbanflow - codsi wanaagsan oo lagu xakameeyo howlaha sugaya
Kanbanflow waa aalad wax soo saar oo loo adeegsankaro biraawsarka ama aaladaha mobilada.Waxaa si weyn loogu adeegsadaa cilaaqaadka shaqada ee fog, taas oo ah, nooca madaxa banaan; Iyada, ururrada ama kooxaha shaqeeya waxay ku arki karaan horumarka howlaha mid kasta oo ka mid ah xubnahooda. Hadday ...
tabo cusub, Internet iyo Blogs
Talaabooyinka lagu raadinayo telefanka gacanta
Anaga oo tixgelinayna muhiimadda ay taleefannada gacantu u leeyihiin nolol maalmeedkeenna maanta, waxaan u janjeedhnaa inaan u daryeelno iyaga sida ilmo yar, iyaga oo ka soo iibsanna daboolida, muraayad qabow oo loogu talagalay ilaalinta shaashadda, giraanta dhabarka si loo xajiyo iyo xitaa ilaaliyayaasha biyaha haddii aysan caddayn u ahayn ...
Xiisadda Venezuela - Blog 23.01.2019
Shalay, 11-kii fiidnimo ayay walaalahay u soo baxeen mudaaharaad, waxaan ku idhi fadlan guriga taga, laakiin walaashay ayaa ku jawaabtay - maxaan ku sameeyaa guriga? Waan gaajaysanahay, waxa kaliya ee qaboojiyaha ku jira waa ukumo iyo Haddii aan mid cuno, waxaan qado ka qaadaa qof kale, waxaan ...
Internet iyo Blogs, Politics iyo Dimuqraadiyadda
Xaqiiqo muuqda ama mid run ah Taasoo ka fiican in la soo bandhigo mashruuc?
Qaabka loo soo bandhigo mashaariicda ayaa waxaa soo martay isbadal muhiim ah, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dijitaacinta warshadaha iyo adeegsiga tikniyoolajiyadaha cusub. Waxayna ahayd waqti kahor intaanay horumaradani sidoo kale gaarin waaxda qaabdhismeedka. Xaqiiqda la kordhiyay iyo xaqiiqda dalwaddiiba waxay siineysaa suurtagalnimada soo bandhigida mashaariicda ...
Skrill - waa bedel Paypal
Horumarka tikniyoolajiyadda ayaa u saamaxday bini-aadamka inuu kala xiriiro meel kasta, hadba sida loo arko xirfadahooda ama xirfadahooda waxaa suurto gal ah in lagu bixiyo nooc kasta oo adeeg ah oo ku saabsan barnaamijyada sida Freelancer, Workana ama Fiver, kuwaas oo xulafo ku leh soo dhaweynta iyo gaarsiinta. bixinta hababka kala duwan. Maqaalkan…
Rincón del Vago: Khayraadka naga horay usoo saaray dhibaatada
Badanaa waxaa la yiraahdaa in xilliga ardaygu yahay midka ugu raaxada badan uguna wanaagsan dhammaan xilliyada nolosha aadanaha. Waa xilligaas nolosha ee qofku uu ku noolaado bilaa firaaqo, isaga oo aan wax badan ka fikirin shaqada oo aan ka welwelin mustaqbalka; muddada nolosha markii ...
Geofumadas wuxuu kugu martiqaadayaa inaad ka ogaato qoraallada online ee ku yaal bogga IGN Spain!
Hore: Daryeelka waxkasta oo laxiriira joqoraafiga iyo hormarinta sawir gacmeedka wadan kasta wuxuu abuuray abuuritaanka wakaalado dowladeed oo gacanta ku haya howshan muhiimka ah. Xaaladaha qaarkood waxay kuxirantahay Wasaaradda Difaaca ama mid kale marka loo eego shaxda ururada gudaha ee wadan kasta, noocan ...
Cartografia, Internet iyo Blogs, aragti ugu horeysay
Ku doorbidida adeeg bixiyaha waraaqo badan - khibrad shaqsiyeed
Ujeedada laga leeyahay waxqabad kasta oo ganacsi oo ka dhex muuqda internetka waa mid waligeedna noqon doona in la abuuro qiime. Tani waxay khuseysaa labadaba shirkad weyn oo leh degel, oo rajeyneysa inay u tarjunto booqdayaasha iibka, iyo baloog rajeynaya inuu helo taageerayaal cusub oo uu ku sii hayo kuwa hadda jira. Labada xaaladood, ...
4 Tilmaamood oo lagu guuleysto barta Twitter - Top40 Geospatial Sebtember 2015
Twitter waa halkaan sii joogista, gaar ahaan ku tiirsanaanta sii kordheysa ee internetka ee adeegsadayaasha isticmaala maalin kasta. Waxaa lagu qiyaasayaa in sanadka 2020 80% dadka isticmaala ay ku xirnaan doonaan internetka aalada moobaylka. Goobtaadu wax macno ah maleh, haddii aad tahay cilmi-baare, la-taliye, soo-bandhige, ganacsade ama madax-bannaan, maalin maalmaha ka mid ah waad ka qoomameyn doontaa inaadan ...
Geospatial - GIS, Internet iyo Blogs
25,000 dunida oo dhan maps diyaar u download
Aruurinta Khariidadda Maktabadda 'Perry-Castañeda' waa ururinta cajiibka ah oo ka kooban in ka badan 250,000 khariidado ah oo la baaray oo laga heli karo khadka tooska ah. Inta badan khariidadahaani waxay ku yaalliin qaybta dadweynaha oo qiyaastii 25,000 ayaa hadda la heli karaa. Tusaale ahaan, waxaan tusnaa qaar ka mid ah khariidadaha laga heli karo ...
Cartografia, Baridda CAD / GIS, Internet iyo Blogs
Nambarada qabow ee ka socda Top 40 Geospatial ee Twitter
Waqti ma aanan rumaysnayn in waxqabadka koontada Twitter ay noqon karto mid aad muhiim u ah. Laakiin adduunyada aan ku harqinayno badda dhexdeeda, saddexda saacadood ee nolosha Tweet waxay noqoneysaa mid soo jiidasho leh haddii cinwaannadaas matalaya aqoonta loo soo saaro si isdaba-joog ah oo xulasho leh, oo lagu daray ...
Maxaa ku dhacay Top40 Geospatial ee Twitter
Lix bilood ka hor waxaan dib u eegis ku sameynay ku dhowaad afartan akoon twitter, oo ku jira liistada aan ugu yeerno Top40. Maanta waxaan cusbooneysiineynaa liiskan si aan u aragno wixii dhacay intii u dhaxeysay May 22 iyo dhammaadkii Diseembar 22, 2014. Dhammaantood, 11 waxay ku qoran yihiin Ingiriis, labo waxay ku qoran yihiin Boortaqiis iyo inta kale ...
blog Si wanaagsan u hesho majallado
UPSOCL - Waa goob loogu talo galay dhiirrigelinta
Iskuxirkiisu waa mid fudud, bilaa garabna, xayeysiis la'aan, kaliya waa foom raadin iyo menu aan la arki karin oo leh shan qaybood. Waa barta looga hadlo Isbaanishka UPSOCL, oo ​​loogu talagalay in lala wadaago waxyaabaha muhiimka u ah adduunka. Waxyaabaha dhiirrigeliya, waxyaalaha dhagarta ah, iyo waxyaabaha ay tahay in la arko. Ay…
Internet iyo Blogs, Leisure / waxyi
Top 40 Geospatial Twitter
Twitter wuxuu u yimid inuu beddelo inta badan soo socda ee aan ku sameyn jirnay quudinta dhaqameed. Waxaa isweydiin mudan sababta ay tan u dhacday, laakiin waxaa laga yaabaa in hal sabab ay tahay waxtarka u leh ka-daaya wararka moobiilka iyo suurtagalnimada in la kala shaandheeyo liisaska ka tagaya waxyaabaha aan danteenna ahayn. Gudaha…
Si wanaagsan u hesho majallado egeomates My
Geospatial - GIS, Internet iyo Blogs, egeomates My
BlogPad - Tifatiraha WordPress ee iPad
Waxaan ugu dambayntii helay tifaftire aan ku qanacsanahay iPad-ka. In kasta oo ay tahay WordPress barta ugu weyn ee wax lagu qoro, halkaas oo ay ku yaalaan sheylo tayo sare leh iyo fiilooyin, dhibka helitaanka tifaftire wanaagsan ayaa had iyo jeer dhibaato ahayd. Wixii desktop wali wax ma heli karo. Waxaan isku dayay BlogPress, WordPress ee iOS, Blog Docs, ...
Apple - Mac, Internet iyo Blogs, aragti ugu horeysay
CartoDB, waxa ugu fiican ee lagu abuurayo khariidadaha internetka
CartoDB waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu xiisaha badan ee loo sameeyay abuurista khariidado midabyo leh oo khadka tooska ah ku socda waqti aad u gaaban. Lagu rakibay PostGIS iyo PostgreSQL, diyaarna u ah in la isticmaalo, waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan arkay ... iyo in ay tahay hindiso asal ahaan ka soo jeeda Hispanic, waxay ku dareysaa qiime. Foomamka ay taageerto Maxaa yeelay waa horumar diiradda ...
Geospatial - GIS, tabo cusub, Internet iyo Blogs
Karmacracy, mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee blogs iyo shabakadaha bulshada
Kuwa leh baloog, bog Facebook ah ama xisaab Twitter ah ayaa laga yaabaa inay isweydiiyeen su'aalahan: Immisa booqasho ayaa ka timaadda mid ka mid ah Tweets-ka? Immisa qof oo soo booqdayaal ah ayaa yimaada saacadda ugu horreysa ka dib markii aan ku dhejiyo isku xirka boggeyga Facebook? Sida loo qorsheeyo tweet kaliya maanta 10: 35 ...
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 12 page Next
Koorsada Horukacsan ee ArcGIS Pro
Baro sida loo isticmaalo astaamaha sare ee ArcGIS Pro - GIS barnaamijyada beddela ArcMap Baro heer sare oo ...
Koorsada BIM 4D - adoo adeegsanaya Navisworks
Waxaan kugu soo dhaweyneynaa deegaanka Naviworks, aaladda shaqada iskaashiga ah ee Autodesk, oo loogu talagalay maareynta mashruuca ...
Koorsada Web-GIS oo leh softiweer furan iyo ArcPy oo loogu talagalay ArcGIS Pro
AulaGEO wuxuu soo bandhigayaa koorsadan oo diiradda lagu saaray horumarinta iyo isdhexgalka xogta goobaha ee hirgelinta internetka ...